एक्कासि बढ्यो चिसो ! | चितवन पोष्ट दैनिक
एक्कासि बढ्यो चिसो !
२०७० पुष ५, शुक्रबार ०४:०७ गते
भरतपुर । आछुछु ! एक्कासी चितवनमा पनि चिसो ह्वात्तै बढेको छ । दुई दिनदेखि अप्रत्याशित रुपमा जाडो बढेपछि कामकाज प्रभावित भएको छ । भरतपुर क्षेत्रमा पनि बिहान १० बजेसम्म हुस्सु र कोहिरो लाग्दा धेरै मानिसको बिहानी कामकाजमा ज्यादै अफ्ठ्यारो भएको छ । चितवनको न्यूनतम तापक्रम १० डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।
अत्यधिक चिसो बढेपछि कम मानिसहरु कामकाजमा बाहिर निस्केका छन् । जाडोले गर्दा आगो ताप्ने मानिसहरु बढ्न थालेका छन् भने मोटरसाइकलमा हिँड्ने मानिसहरु पनि गाडीको यात्रा गर्न थालेका
छन् । दिनभर नै घाम नेदेखिए पछि पश्चिम चितवनका विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरु कमी भएका छन् ।
‘यति छिटो जाडो बढ्यो, यसपटक विद्यालयहरुमा जाडो बिदा चाँडै दिनुपर्ने अवस्था देखियो’ नारायणगढका शिक्षक दयाराम ढकालले बताए । ‘अहो, कति चिसो बढेको हो, विद्यालय जान पनि निक्कै गाह्रो भएको छ । बिहान ११ बजिसक्दा पनि घामका किरण देखिँदैन’ शुक्रनगरका शिक्षक बाबुराम खनालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पुस लागेपछि जाडो झन्–झन् बढेको छ ।
जाडोको कारण गाईपालन गर्ने किसानहरुलाई समस्या भएको छ । ‘हातै थरर कामेको हुन्छ, पानी छुनै मन लाग्दैन के गर्ने गाईलाई कुँडो चोकर खुवाउनै प¥यो’ पश्चिम चितवनका कृषक कृष्ण दाहालले भने, ‘बिहानै कुँडो पानी खुवाउन पनि उठ्नै सकिन्न ।’
बाक्लो कुहिरो लाग्ने, घाम ढिलो देखिने गर्नाले चितवनलगायतका आसपासका जिल्लाहरु प्रभावित बनेका हुन् । अप्रत्याशित मौसम परिवर्तनले गर्दा स्थानीय बासिन्दा चिसोको मारमा परेका छन् । अत्याधिक चिसो बढेपछि वृद्धवृद्धा तथा बालबालिकाहरु आगो तापेर बसेका छन् । चितवनको पहाडी गाउँहरुमा पनि चिसो बढेको छ ।
‘यहाँ त अचाक्ली चिसो बढेको छ, हामी त आगो तापेर बसेका छौँ’ कोरकका एक चेपाङले भने, ‘लामो समयसम्म घाम नै लाग्दैन के गर्ने आगो ताप्ने बस्ने ।’
काठमाडौंमा शून्य दशमलव ७ डिग्री सेल्सियस रहेको काठमाडौंमा बिहीबार शून्य दशमलव पाँच डिग्री रहेको छ । बिहीबारै काडमाडौंको अधिकतम तापक्रम १८ देखि २० डिग्रीसम्म रहेको बताइएको छ । जुम्लामा भने माइनस रहेको छ । जुम्लामा माइनस ८.७ डिग्री तापक्रम रहेको छ । त्यहाँका मानिसहरु तल बेसीमा झरेका छन् ।
मौसम परिवर्तनले गर्दा यसपटक जाडो चाँडै आउने र ढिलो सकिने अवस्था देखिएको मौसमविद्हरुले बताएका छन् ।
त्यस्तै सोलुको सल्लेरीमा आगोसँगै कतैकतै हिउँसमेत परेको बताइएको छ । अत्यधिक चिसोका कारण जिल्लाका सदरमुकाम सल्लेरीका स्थानीय बासिन्दा एवम् कर्मचारीहरूको कामकाज प्रभावित भएको छ ।
तीन दिनदेखि अप्रत्याशित रूपमा बाक्लो कुहिरो लाग्ने, सिमसिम पानी पर्ने साथै चिसो हावाका कारण सदरमुकामलगायत आसपासको जनजीवन प्रभावित बनेको हो । पछिल्लो समयमा सोलुखुम्बु जिल्लामा अप्रत्याशित रूपमा मौसम परिवर्तनले गर्दा स्थानीय बासिन्दा चिसोको मारमा परेको स्थानीयहरूको भनाइ छ ।
‘चिसोले गर्दा बाहिर निस्कन सकिएको छैन, यो हिउँद कसरी काट्ने हो’ सल्लेरी–५ नयाँबजारका व्यापारी दोर्जी शेर्पाले भन्नुभयो । चिसोले गर्दा घरपालुवा पशुपक्षीलाई समेत असर परेको किसान बताउँछन् ।
‘के गर्ने जाडोले गर्दा बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नै छैन, यदि बाहिर निस्की हालेमा आपैmँलाई चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मरिने पो हो कि भन्ने डर छ, त्यसैले वस्तुभाउ पनि बुधबारदेखि पेटभरि खान पाएका छैनन्’ सल्लेरी–२ फाप्लुका किसान लाक्पासोनाम शेर्पाले भन्नुभयो ।
चिसोका कारण मङ्गलबारदेखि सदरमुकामलगायत आसपासका स्थानीयहरू दिनभरजसो ढोका थुनेर आगो तापेर बसिरहेका छन् ।
अत्यधिक चिसोका कारण वृद्धावृद्ध र बालबालिकालाई बढी सताएको छ । झनै जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्र खुम्बुमा भएका कतिपय मानिसहरू चिसोका कारणबाहिर समेत निस्कन नसकेको लुक्लाका स्थानीय सूर्य थुलुङले बताउनुभयो ।
‘चिसो को त कुरै नगरौँ, अघिल्लो सालभन्दा यो साल त धेरै जाडोको महसुस भइरहेको छ’ स्थानीय थुलुङले थप्नुभयोे ।
जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रका अधिकांश मानिस जाडो छल्नका लागि १५ दिनअघि नै देशका विभिन्न ठाउँमा गइसकेका छन् भने घर हेरचाहका लागि केही स्थानीय मात्र खुम्बुमा रहेका छन् । चिसोका कारण यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा हरेक वर्षको हिउँदमा काठमाडौँलगायत विभिन्न तीर्थस्थलमा दर्शन गर्न जाने गरेका छन् ।